Donald ကို - porn - Your Brain On Porn - အပြာစာပေတစ်ခုတည်းသာ Donald ကိုနှိုးဆွပေးခဲ့သည်
ဆွီဒင်: ညစ်ညမ်း Donald နှိုးဆော်ခြင်းတယ်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်
(Google ကဘာသာပြန်ဆိုDonald ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုမှန်ကန်ဘို့လိင်ရှိသည်မယ်လို့ဘယ်အချိန်မှာ), သူကမျှအလိုဆန္ဒခံစားရတယ်။ သို့သော်သူကအလွယ်တကူညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအားဖြင့်နှိုးဆွခဲ့သည်။ နှင့်လိင် problemen ရုံဆက်ပြောသည်။
Donald သူတို့ porn ခွန်အားမရှိခြင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းခံစားခဲ့ရသူကိုလုလင်တစ်ဦးတိုးပွားလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကတကယ်များအတွက်လိင်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဖြစ်ပါသည်။
- မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်အိပ်ပျော်သွားချိန်တွင်ကျွန်ုပ်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ငါမရိုးရိုးလေးလုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့တစ်ခုခုပျောက်နေသလိုပဲ။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်တူထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူး, Kalle ကပြောပါတယ်။
ပထမဦးစွာသူတစ်ဦးကြီးမားတဲ့အရှက်ကွဲခြင်းကိုခံစားရပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလိင်တူချစ်သူခဲ့ကြောင်းထို့နောက်စဉ်းစားမိတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်သူသည်၎င်းတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်မှုများနှင့်အတူအကြောင်းကိုသွားလေ၏။ ထို့နောက်သူကအွန်လိုင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်များစွာသောလုလင်တို့သည်လည်းအများကြီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ဆက်စပ်. porn ကြည့်ရှုပြဿနာများကိုတစ်ဦးအကြောင်းမရှိနိုင်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
- ထိုအခါငါလိင်ဆက်ဆံရန်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးစားရပ်တန့် Kalle ကိုဆက်လက်။
သူသည်ယနေ့ဆယ့်ကိုးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူသည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှ“ ကုသ” ခံခဲ့ရသည်ဟုခံစားရသည်။ သူ့ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်တော့တော့ပါ။
Donald သည်အသက် ၁၃ နှစ်တွင်ပိုက်ကွန်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုတိုတိုများစွာရှိပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်မရွေးသူများအတွက်ပင်။
- ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ထိုင်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေ့ရှိသည်။ အဆုံးမှာတော့တစ်နေ့ကိုသုံးလေးကြိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ရုပ်ရှင်များတွင်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။ ငါ“ ပုံမှန်” ရုပ်ရှင်အများစုကိုကြည့်ခဲ့တယ်။
Donald သူလူငယ်တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်အတော်လေးရှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတဆယ်ခြောက်ခဲ့သောအခါသူတစ်ဦးပါတီမှာခေတ်ပြိုင်မိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူကသူမ၏နေအိမ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သူတို့ကလည်ပင်းနမ်းနှင့်သူမ၏အိပ်ရာအတွက်နောက်ဆုံးမှာအဝတ်အချည်းစည်းခဲ့သည်။
- သူမသည်တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်းသတိပြုမိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ကျွန်တော့်လိင်တံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး ဒါဟာမြည်းကြိုးကိုဖြည်ကြီးနှင့်ငါအနေအထားမရခဲ့ပေ။ သူမသည်၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သလောဟုမေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဘာမျှမလုပ်ခဲ့ပါဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ချာလီနှင့်ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းအိမ်တွင်တွေ့ဆုံပြီးမိဘများသည်တိုင်းပြည်သို့ထွက်သွားကြသည်။ သူတို့သည်ရုပ်ရှင်ကြည့်သည်၊ စားဖိုမှူးများနှင့်ဘီယာအချို့သောက်ကြသည်။ သူတို့ကပွေ့ဖက်၊ ခဏထွက်လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့်အဲဒီတုန်းကပြီးခဲ့သည့်အချိန်ကကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
- ဒီတစ်ခါလည်းငါတစ်ခုခုအကြောင်းရတယ်။ အခုတော့ငါပို။ ပင်ရှက်မိခံစားရတယ်။ နောက်အပတ်မှာကောင်မလေးကိုထပ်ခေါ်ပြန်သည်၊ သို့သော်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့များအားလုံးအလုပ်များနေသည်ဟုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါအားလုံးသဲပေါ်မှာထွက်ပြေးလေ၏။ ငါသူမကိုကျောင်းမှာတွေ့ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတွေကိုပြောပြပြီးငါ့ကိုလှောင်ပြောင်လိမ့်မယ်လို့ကြောက်လန့်နေတိုင်း။
သူ masturbated စဉ် Donald အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့ဆက်ပြောသည်။ ထိုအခါကတစ်ဦးအနေအထားရရန်မပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ခြောက်လအကြာမှာတော့သူကတစ်ပါတီမှာအသစ်တခုမိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဟာသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တို့အားပေးလေ၏။ သူတို့ကသူမ၏အိမ်တွင်တဦးတည်းနေ့လည်ခင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
- ထပ်တူပြproblemနာ။ ငါအရမ်းပေါ့ပေါ့တန်တန်ခံစားခဲ့ရပြီးယခုရာထူးနေရာမရခဲ့ပေ။
အခုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလိင်တူချစ်သူဖြစ်ဘူးသောအ Donald 17 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ်နှင့်၎င်းတို့၏အတွေးများကိုပိုပြီးမကြာခဏရောက်လေ၏။
ကျွန်တော့် ဦး လေးကလိင်တူချစ်သူပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အတွက်တော့ကြောက်စရာ၊ ငါ၌bögfobiမရှိ။ ယောက်ျားများနှင့်ယောက်ျားများကိုစွဲလမ်းမှုတစ်ခါမှမကြုံဖူးသော်လည်းယောက်ျားများသည်လိင်ဆက်ဆံသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ခါမျှမကြည့်ခဲ့ကြပါ။
ထိုအခါတနေ့အခြားသူများကိုအလားတူအတှေ့အကွုံကိုပြောသည်ရှိရာအွန်လိုင်းဖိုရမ်များအပေါ် Donald အနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။ သူကသောသူတို့သည်စစ်မှန်သောအဘို့လိင်ရှိသည်မယ်လို့အခါအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုဖြစ်တယ်, လုလင်တို့သည်သူတို့ porn ခွန်အားမရှိခြင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံဘယ်မှာအများအပြားဆွေးနွေးမှုဟာ Thread တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
- ငါပုံပြင်များတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၊ တဖန်“ ကောင်းသော” ဖြစ်လာရန်နည်းလမ်းရှိကြောင်းကိုလည်းဖတ်ခဲ့သည်။ အတော်များများက porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းများမှာရပ်တန့်ခဲ့ကြပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာတော့သူတို့ဟာတကယ့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ငါ "စာရွက်" ကိုလိုက်နာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောခြောက်လက Donald သည်အထက်တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေးနှင့်စတင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နှစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာအိပ်မက်မက်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတောင့်တခဲ့တယ်။ သူဟာစွမ်းရည်ရှိပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
- ငါငိုခဲ့ပြီးကောင်မလေးကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောတဲ့အတိုင်းသူမလည်းအရမ်းကိုစွဲမက်သွားတယ်။
အဘယ်ကြောင့်သင်ယခင်ကအစစ်အမှန်လိင်နှင့် ဆက်စပ်. အလင်းမှပြဿနာများရှိခဲ့ကြပြီထင်သလဲ
- ငါကအကြောင်းအများကြီးစဉ်းစားမိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များတွင်မိန်းမများညည်းညူစွာညည်းတွားနေပြီး၎င်းတို့သည်များစွာသောအရာများကိုလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိကြသည်။ ငါဒါဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမသိစိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စစဉ်းစားခဲ့လျှင်ငါမသိ, ဒါကြောင့်ငါအနေအထားမရခဲ့ပေ။ အခုတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကနောက်တစ်ခါညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ဖို့ဆွဲသွားမယ်။
LINK - ဆွီဒင်: ညစ်ညမ်း Donald နှိုးဆော်ခြင်းတယ်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်
Porren var det enda som fick Kalle AT & T tända